Mipetraha amin'ny tapa-kazo amin'ny hip
Ny mpamorona ankehitriny dia manolotra ankizivavy maro karazana famitahana, izay misy amin'ny antsipiriany amin'ny akanjo. Mazava ho azy, ny tena mahazatra dia dekollete lalina, izay azo jerena na dia any amin'ireo mpanjakavavy mahazatra aza. Saingy lasa saina be loatra ity safidy ity ka tsy hahagaga azy na iza na iza. Zavatra iray hafa dia ny manao akanjo miaraka amin'ny fihintsanana amin'ny hip. Ny tsipiriany mahavariana toy izany dia hanome endrika tsy misy dikany, ary koa tsy manakana azy tsy hanamarina ny famitahana.
Raha mijery ny sarin'ireo Hollywood olo-malaza ianao, dia azonao atao ny manatsoaka fa malaza be ny akanjo miaraka amin'ny fery eo amin'ny tongotra. Ity akanjo ity dia nahavita nanandrana ny Kristen Stewart, Jennifer Lopez, Sharon Stone ary Penelope Cruz. Ny lamaody iray ho an'ny akanjo miaraka amin'ny tapa-doha avy amin'ny mpiasa an-tserasera dia nahavita nanonona anarana hoe "mampihetsi-po an'i Jolie." Avy amin'ny endrik'i Angelina Jolie io fiheverana io tamin'ny loka malaza amin'ny akanjo mainty miaraka amin'ny sobika. Avy eo dia nanjary fitaovana handinihana ny fifosana rehetra ny kitranin'ilay kintana.
Na eo aza ny feon-kira manjavozavo fa ny akanjo miaraka amin'ny tapa-doha amin'ny takariva dia tsy misy afa-tsy hariva, misy karazany maro hafa misongadina amin'io akanjo io. izany hoe:
Cocktail akanjo mitaingina. Zavatra iray eo anelanelan'ny akanjom-boninahitra alim-pandihizana izany ary maotina ny efitra fandroana isan'andro. Ny halavan'ny an'io akanjo io dia matetika tsy ambany noho ny lohalika, na izany aza, misy dikan-teny fohy. Ny fitafiana matetika dia manana firavaka manankarena, na mifanohitra amin'ny toetr'andro dia misy karazana silhouette laconic. Tsy misy dikany ny décollete amin'ity akanjo ity.
Akanjo hariva miaraka amin'ny fatorana. Ity fitaovana hitantsika eo amin'ny karipetra mena sy karazana bonus rehetra ity. Drafitra matsiro, akora manankarena, fanimbana lalina sy marika malaza no fitsipika fototra amin'ny akanjo amin'ny Hollywood!
Fitafy mitafy akanjo. Ity safidy ity dia mety tsara amin'ny biraon'ny birao. Na izany aza, tsy maintsy tadidintsika fa ny halavany dia tokony ho moderina, ny loko - kilasy, ary ny tapa-bolana - tena kely. Ny fitafiana mena amin'ny fehiloha , voaravaka amin'ny akanjo lava Swarovski dia mety tsy mety.
Raha manapa-kevitra ny hijanona amin'ny iray amin'ireto modely ireto ianao, dia tadidio fa tsy tokony hisy sary sokitra hafa ny akanjo tianao, na ny sary sokitra na ny lavaka mangina. Mahatsiravina izany.
Ny akanjo miora avy any Mouton - ireo modely modely sy mahafinaritra indrindra
Autodromes of mink
Karazan'akanjony amin'ny baolina
Gipure fitondra amin'ny akanjo lava lava
Agent Provocateur kiraro
Toerana misy kiraro avo
Ombre amin'ny volo fohy
Kitapo mitondra saka
Bella Hadid tao amin'ny fetiben'ny sarimihetsika Cannes dia namerina ny sariny "maizina" tamin'ny herintaona
Nisy mpanoratra malaza avy ao amin'ny UK Jackie Collins nodimandry
Takelaka ho an'ny lakozia
Ahoana ny fomba hanaovana ny fandriana?
Mirabilis - fitrandrahana sy fitsaboana eny an-kalamanjana
Tachycardia ny fo
Cocktail "Hiroshima" - resipe
Toeram-pandinihana nomerika home station
Natalia Vodyanova dia mampiseho ny fomba itoerany miaraka amin'ireo ankizy any Japana
Kabinetra tanimanga ao an-dakozia
Fashionable jackets 2015
Tapakila ho an'ny efitranon'ny ankizy
Sarobidy ve ny daty?